DAAWO: PSG oo guul muhiim ah ka gaartay Manchester United, xili Pogba ciyaarta laga saray. – Wakaaladda Wararka Hiilnews
DAAWO: PSG oo guul muhiim ah ka gaartay Manchester United, xili Pogba ciyaarta laga saray.
By admin on 13/02/2019 No Comment
Arbaco, Feberaayo, 13, 2019 (HNN)- Kulanka ayaa ahaa mid aad u xiiso badan United oo marti loo ahaa ayaa soo bandhigtay qaab ciyaareed cajiib ah qeebtii koowaad ee ciyaarta waxa ayna sameyeen isku dayo gool loo filan karay.
Geesta kale kooxda reer Farnce ee PSG ayaa dhankooda la yimid bandhig aad u wanaagsan walow lowga gacan sareyey ciyaarta hadana uma aysan duurta galin in ay gool dhaliyaan.
Qeebtii koowaad ee ciyaarta ayaa lagu kala maray bareejo labada dhinac ayaana awoodi waayey in ay shabaqa garaan .
Waqti kooban oo ay ciyaartoyda talooyin wax ku ool ah ay ka soo qaateen macalimiintooda waxaa dib loo anba qaaday ciyaarta oo aad u xiiso badneed.
Kooxda PSG ayaa qeebtii dambe ee ciyaarta ku soo gashay dar dar xoogan waxaana u suura gashay in ay helaan goolka koowaad ee kulanka waxaana u dhaliyey daafacooda lagu magacaabo Kimpembe waxaana caawinteeda lahaa Di Maria .
Daqiiqadii 60-aad ee ciyaarta waxaa dhashay goolkii labaad ee ciyaarta waxaana dhaliyey xidiga xawaaraha badan ee Mbappe waxaana markale gooshaas caawiyey Di Maria .
Pogba oo ah mishiinka qadka dhexe e United ayaa loo taagay calaamada gaduudan kaddib markii uu qalad ku galay Dani Alves waxa uuna seegi doona luvta labaad oo ka qabsoomi doonata 6- bisha soo aadan caasimada Farance , kulanka ayana gabi ahaanba ki idlaaday 2-0 .
DAAWO: PSG oo guul muhiim ah ka gaartay Manchester United, xili Pogba ciyaarta laga saray. added by admin on 13/02/2019